ब्याजदर घटाउन र तरलता प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ - Karobar National Economic Daily
ब्याजदर घटाउन र तरलता प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ
query_builderJuly 3, 2017 1:04 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility2587
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तयार गरिरहेको समयमा वित्तीय बजारमा चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । तर, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उच्च ब्याजदर र कर्जायोग्य रकमको समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कस्तो कदम लिने हो भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ ।
बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गरेका छन् भने निक्षेप तान्नका लागि ब्याजदर बढ्ने क्रम जारी छ । त्यति मात्र नभई सरकारले तोकेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने भनिएको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आउनु आवश्यक हुन्छ ।
चर्को ब्याजदरका कारण लगानी उद्यमी तथा व्यापारीहरू लगानी गर्न नसक्ने अवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गरेको खण्डमा स्थिरताउन्मुख राजनीतिक वातावरण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौतीको विषय होइन । तर, भर्खरै मात्र पुँजी वृद्धिको चापमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जायोग्य रकम अभावको समस्या समाधान नभएको खण्डमा कर्जा लगानी विस्तार हुने अवस्था छैन । कर्जा लगानी नभएको खण्डमा उद्योगधन्दा खोल्न तथा सञ्चालन गर्न पनि सहज हँुदैन ।
खुलेको खण्डमा पनि ती कम्पनीले चर्को ब्याजमा लिएको ऋणको बोझ सर्वसाधारणमा स्थानान्तरण हुने भएकाले महँगी बढ्ने निश्चित छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले हालको वित्तीय प्रणालीको समस्या समाधान गरेर लगानीमैत्री मौद्रिक नीति ल्याएको खण्डमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने निश्चित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पूर्व गभर्नर तथा बैंकरहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानी ः
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुँदा मूल्यवृद्धि हुन्छ
सरकारले बजेट ल्याएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति घोषणा गर्ने प्रचलन छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा बढी बजेट खर्च गर्न सके राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेट बढाउँदै जानुले जनतामा केही आशा बढेको पाइन्छ ।
विनियोजित बजेट सही ढंगले खर्च भएन वा अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसले बजारमा असर पार्न सक्छ, जसका कारण मूल्यवृद्धि हुन्छ । जनतालाई खुसी पार्न सरकारले बजेट बढी ल्याउने गर्छन् । ब्याजदरमा फरक बैंकिङ तरलता आउन सक्छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सुधार गर्न ल्याइने नीति मौद्रिक नीति हो । बजेट बढी खर्च गर्न सकिए राम्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ ।
सरकारको सल्लाहकारका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा भए पनि आगामी वर्ष ६ प्रतिशत हुने आकलन गरिएको छ । कर्जाको दर २० प्रतिशत पु¥याउने भनेकोमा ३० प्रतिशत भएको छ । बैंकहरूमा ऋण बढेको छ । लगानी बढ्ने भएको छ । ठेकेदार र सेयर मार्केटमा काम गर्नेले पनि उदारपूर्वक लगानी गर्ने वातावरण मिलाउन माग गर्दै आएका छन् ।
अटोमोबाइल, रियलइस्टेट क्षेत्रमा बढी रकम गएकाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कम लगानी भएको छ । बैंकहरूले साढे १३ प्रतिशतसम्म कर्जामा ब्याजदर दिने गरेका छन् । गत वर्षमा जत्तिकै नाफा अर्को वर्ष कमाउन नसके लगानीसँगै ब्याज बढाउने गरेका छन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व भएको ठहरिँदैन ।
मूल्य तलमाथि नहोस्, बजारको मूल्य सन्तुलन राख्न सकियोस्, लगानीकर्ताले उचित ब्याजदरमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीमा जोड दिने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । हाल एक बराबर १३ व्यापार घाटा बेहोर्दै आएका छौं । अहिले व्यापारघाटा देशको कहालीलाग्दो समस्याका रूपमा देखा पर्दै आएको छ । सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ, अटोमोबाइल्सको बजारले व्यापारघाटा बढाएको हो । भूकम्पप्रभावितलाई नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न दिँदा पनि व्यापारघाटामा प्रभाव पारेको हो ।
व्यापारघाटा हुँदा हामीले भुक्तानी गर्नुपर्छ । यस्ता क्रियाकलाप जारी रहेको खण्डमा भुक्तानी सन्तुलन गर्न केन्द्रीय बैंकलाई कठिन हुन्छ । विप्रेषण घट्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कम हुन सक्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकलाई कम्तीमा ६ महिना पुग्ने सेवा तथा वस्तु आवश्यक पर्ने हुन्छ, तर हाम्रो देशमा १२ महिना पुग्ने सेवा तथा वस्तु रहेको छ । २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
केहीले त्यो बजेटलाई वाणिज्य बैंकमार्फत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न माग पनि गरेका छन् । रकम बचत हुँदैमा खुसी हुने कुरा होइन, आवश्यक विकास–निर्माण हुनुपर्छ ।वित्त नीति भनेको सरकारले बजेटमार्फत करको माध्यमबाट कानुनी ढंगले सहज तरिकाले मुलुकलाई अघि लैजाने हो । वित्त नीतिले विकास–निर्माण गर्छ ।
मौद्रिक नीतिले सरकारले आशावादी भएर त्यसले पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव कम गरी विकास–निर्माणमा प्रशस्त खर्च गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी वा खर्च हुँदा मूल्य वृद्धि हुन्छ । मूल्य वृद्धि एक प्रकारको कर नै हो । मौद्रिक नीति आफ्नो दायरामा रहनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा खुलेर लगानी गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादन क्षेत्रमा बढी लगानी गरेकाले धेरै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता भएको थियो । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले हरेक चौमासिकमा नाफा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले गर्दा कर्जा लगानीमा महिनामै दुई देखि तीन पटकसम्म ब्याजदर वृद्धि भएको थियोे । राष्ट्र बैंकले गत वर्षको तेस्रो चौमासिकमा ३८ अर्ब ५ करोड लगानी गरेकोमा यस आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकमा ३० अर्ब ४६ करोड लगानी गरेको छ । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा लगानी कम गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी नविल बैंकले गत वर्ष तेस्रो चौमासिकमा ४ अर्ब ६८ करोड लगानी गरेकोमा यस वर्षको तेस्रो चौमासिकमा २ अर्ब ८२ करोड लगानी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष तेस्रो चौमासिकमा १ खर्ब ६५ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको थियो भने यस आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकमा १ खर्ब ६५ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, अटोक्षेत्रलाई अनुत्पादन क्षेत्र भन्दै केही कडाइ गरेसँगै बैंकहरूको लगानी घटेको हो ।
पुँजी वृद्धिका लागि हतारिनु हुँदैन
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था मजबुत हुनुपर्छ भनेर चार गुणासम्म पुँजी बढाएको छ । हालको समयमा अधिकांश संस्था पुँजी पु¥याउने दबाबमै छन् । बैंक–वित्तीय संस्थालाई दिएको चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्त पनि नजिकिँदै गएको छ ।
हालको अवस्थामा राष्ट्रिय स्तरका वा वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी एउटा तहमा पुगेको छ । त्यसैले पनि तत्काल पुँजी वृद्धिको नीति लिनु केटाकेटीको निर्णयजस्तो हुन्छ । अबको एकदेखि दुई वर्ष मौन बसेर अनि मात्र पुँजी वृद्धि योजना बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।
यसको मतलब अहिलेको पुँजी पर्याप्त छ भन्न खोजिएको होइन । तर, पुँजी वृद्धिका लागि अझै पनि बैंक–वित्तीय संस्था संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा पुनः त्यही नीति ल्याउँदा परिपक्व नहुन सक्छ ।
केन्द्रीय बैंकले तयार गरिरहेको मौद्रिक नीति सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा १३ प्रतिशतसम्म पुगेको मुद्रास्फीति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर न्यून हुने देखिएको छ । यो तत्काल पुनः सोही गतिमा फर्कने देखिँदैन । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले आफूले नियमन गर्ने क्षेत्रका समस्यालाई पनि नजिकबाट हेर्नु जरुरी छ ।
पछिल्लो समयमा बैंक–वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नै कम गरेका छन् । त्यसका साथै ब्याजदर पनि उच्च भएको छ । ब्याजदर उच्च भएपछि सरकारले ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्ने भनेको मूल्यवृद्धि सफल हँुदैन । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत हालको वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने र बैंकहरूले लगानी गर्ने वातावरण बनाउनमा जोड दिनुपर्छ ।
मुद्रास्फीति हाल करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । त्यसैले पनि केन्द्रीय बैंकले पैसाको आपूर्ति व्यवस्था मिलाई बजारको कर्जायोग्य रकमको समाधान गर्न सक्नुपर्छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले तरलता छाडेर बैंकहरूलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा देखिएको निक्षेपको कमीका कारण आएको ब्याजदरको वृद्धिलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ब्याजदर निणन्त्रण नभएको खण्डमा उद्यमी, व्यापारी तथा कृषकलाई समेत असर गर्छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउन र तरलता प्रवाह गर्न सफल भएको खण्डमा बजेटले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र ७.२ प्रतिशतको आर्थिक हासिल गर्न सम्भव छ ।
त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नगद सञ्चिति अनुपात बढाउनु हँुदैन । हाल कायम रहेको नगद सञ्चितिलाई घटाएर त्यसको रकम पनि बजारमा तरलताका रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको खण्डमा उपयुक्त हुन्छ ।
हालको समय नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि निकै अनुकूल समय रहेकाले पनि आर्थिक वृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले तरलता आपूर्ति गर्नुपर्छ । त्यो भएको खण्डमा मौद्रिक नीति लगानीमैत्री हुन्छ । ब्याजदर पनि आफ्नो तहमा झर्छ र बैंकहरूले लगानी बढाउन उपयुक्त वातावरण बन्ने देखिन्छ ।
ब्याजदरमा हुने असमानता मिलाउनुपर्छ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेर्दा मौद्रिक नीति विस्तारकारी आउनुपर्छ । तर, विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्न गा¥हो हुन सक्छ । सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न हाल वित्तीय प्रणालीमा चलिरहेको ब्याजको विषयले चर्चा पाउने गरेको छ । व्यवसायीहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा कर्जा बढाएर लगानी बढाउन नसक्ने बताइरहेका छन् ।
त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लगानी बढाउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी बढाउँदा पर्न सक्ने असर भनेको महंगी हो । महंगी नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्थाले ग्राहकको अर्थात ऋणीको वर्गीकरण गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले निगरानी राख्नुपर्छ ।
पहुँचवालाले मात्र बैंकको कर्जा पाउने अवस्था आएको छ । व्यापार व्यवसायमा नयाँ आउने व्यक्तिले बैंक वित्तीय संस्थाले जोखिम धेरै भएको अन्तर्गत राख्ने गरेका छन् । बैंकको कर्जा सस्तोमा पाउन स्थापित व्यवसायी वा पहुँचवाला हुनुपर्ने अवस्था छ ।
केन्द्रीय बैंकले ग्राहकको वर्गीकरण गरेपछि त्यसमा पनि सिमा तोक्ने प्रावधान राख्दा राम्रो हुने हो की ? जस्तो निक्षेपको ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा फरक हुन नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै कर्जा प्रवाहमा पनि तोक्ने की ! त्यसमा ३ प्रतिशतभन्दा फरक हुन नहुने भनेर गर्न पनि सकिन्छ । अगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसका साथै बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई थोरै ब्याज दिने तर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई विड गर्दा धेरै गर्ने गरेका छन् । यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले सोचेर नीति बनाएको खण्डमा सर्वसाधारणले धेरै ब्याज पाउँछन् । बैंकहरूले सर्वजनिक गरेको ब्याजदर र विड गर्ने दरमा फरक छ ।
संस्थागत निक्षेपकर्तालाई भन्दा सर्वसाधारणको निक्षेपको प्रतिफल धेरै हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा देखिएको कर्जायोग्य रकमको अभावको प्रमुख कारण पब्लिक डिपोजिट कम हुनु हो । सर्वसाधारणको निक्षेप ल्याउन धेरै ब्याज दिनुपर्ने भयो ।
त्यसपछि समग्र प्रणालीको ब्याजदर पनि बढ्यो । अब कर्जायोग्य रकमका लागि निक्षेप बढाउनैपर्छ । त्यसका लागि ब्याजदर नबढाइ सुखै हुँदैन । बैंकहरूले गर्ने असमानता हटेको खण्डमा हालको वित्तीय समस्या समाधान भएर बजेटले तोकेको लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
बैंकहरूले पछिल्लो समयमा संस्थागत लगानीकर्तासँग बिड गरेको ब्याजदरभन्दा थोरैमा दिएका छन् । यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै समस्या ल्याउँछ । बैंकहरूले निक्षेपमा तिर्ने ब्याजदरभन्दा कर्जामा लिने ब्याजदर थोरै गरेर कर्जा प्रवाह गरेको अवस्था छ । यसमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेमा वित्तीय प्रणालीको गलत अभ्यासको अन्त्य हुने थियो ।
मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा प्रवाह